The Ab Presents Nepal » पछिल्लो समयको तिहार गीतमा आएको विवादले दुर्गेश थापा प्रहरीको हिरासतमा !
पछिल्लो समयको तिहार गीतमा आएको विवादले दुर्गेश थापा प्रहरीको हिरासतमा !
काठमाडौँ – : बहुचर्चित गायक दुर्गेश थापा प्रहरीको नियन्त्रणमा । दुर्गेश थापाले गाएको गीतमा विवादाआएपछि तिहारको समयमा विकृति फैलाउने खालका गित गाएको भन्दै प्रहरीले नियन्त्रण गरेको हो । उनलाइ आज बस पार्क वाट नियन्त्रणमा लीएको हो। पछिल्लो समय happy tihar happy tihar चिसो बिहार बोलको गीतमा समाजलाई नकारात्मक बाटोतिर डोर्याउन लागेको भन्दै गीतमा आएको विवादले यतिखेर दुर्गेश थापा प्रहरीको हिरासतमा छन्।
गायक दुर्गेश थापा तिहारको मुखमा गाएको ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो बियर’ गीतले विवादमा तानिएका छन् । तिहारको बेला बियर खाने प्रचार गरेका कारण र ‘ए निकाल गाँजा, खानुपर्छ आज’ भन्ने अंश कानुन सम्मत नभएकाले विवादमा आएका हुन् । कानूनी रुपमा प्रतिबन्धित गाँजा खानुपर्छ भन्दै गीत गाएपछि दुर्गेशविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी परेको बताइएको छ ।
उजुरी परेपछि महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुलाई गायक दुर्गेश थापालाई झिकाउन निर्देशन दिएको छ । उजुरीकर्ताले तिहारको गीतभित्र रहेको गाँजा खाने कुरा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । प्रशासन कार्यालयले निवेदकको माग अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तिहारको गीतमा दुर्गेशले गाएका छन् – डन आयो डन, जा मूला भन्,राजा हो राजा,बजाइदिन्छ बाजा,ए निकाल गाँजा, खानुपर्छ आज ।